Myanmar OA6: ကျွန်တော် Tag ပါပြီ
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 9:15 PM
ရေသောက်ရင် လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ရေခွက်ကို ကိုင်ပြီင်္းသောက်ကြည့်ပါလား
ကိုအိုအေစစ် နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ရှိရင် ဘီယာဖိုး တော်တော်ကုန်မှာပဲနော်
Mr. Pooh ကတော့ လုပ်ပြီ။
သူနဲ့ အတူတောင် မသောက်ရဲတော့ဘူး။
မူးလာရင် KTV သွားပြီး ကွေးနေအောင်ကတာလည်း
ဒီတစ်ခေါက် အတူသောက်ရင် အရင်ဦးအောင်
ဟဟ..မစ်စတာပုက မထင်ရဘူးနော် ။ဟိုနေ့ကတွေ့တော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မုန့်တီလုပ်နေပြီး.. ခုကြတော့ ရီရတယ်ကွ.. ဗြဲ
ဟေ့ မစ္စတာပု ကိုစိုးဇီရရောခုထိမတတ်
အမ် ကျိန်စာတိုက်မယ် အဲ့ဒါ ဘီယာလား ၀ိုင်လားဟင် ၀ီစကီဆို မသောက်ဘူးနော် ရောမမှာ ကျိန်စာ ဆိုတဲ့ ရမ်တော့ မကြားဘူးသေးဘူး-
၁) ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ပေးပါ
၂) တွေ့ပြီ ကျားနဲ့ဆင် တော့ ဖဲဝိုင်းမှာ- လုပ်လိုက်လေ ဟောဒီမှာ ဂေါ့အော့ဖ်ဂန်ဘလာ တက်စလာ
၃) ရဲသားတော့ စားမယ်ပေါ့လေ
၄) ကျနော် အင်္ကျီအစုတ် လာပို့မယ်လေ ရွှေနဲ့ လဲရအောင်
၅) လွတ်ဂလိုက်ဝစ်ဒ်မီ ချီးယား အေ့ အောင်မြင် စော်ကြည်
၆) ဟာ သွေးသောက်ကြီးပါလား ၀မ်းသာတယ်ဗျာ တွေ့ရတာ
၇) တွေ့ရင် ချန်မထားနဲ့နော်
၈) မိတ်ဆက်သာ ပေးထားပါဗျာ ချွှန်တွန်းဗေဒမှာ ပါရဂူ ဘွဲ့ ရထားတဲ့ကောင် ပါ
၉) :X (၀ယ်ကျွှေးရမဲ့ ပုံပဲ)
၁၀) ကောင်းလိုက်တဲ့ ဂါထာ လန်ထွက်နေ တာပဲ
Haha Mr. Pooh
Then, kyait thwar pyi
Tit Tar ma sar chin nay par byar.
Sit Tar Tauk sar pop.
Sit Tar Twayamyay gyi shi nay loe Mr.Pooh mha ma sar yin kone mhar ma hote loe par.Dar Pin mal Sit Tar tway ko sar yin ta te htar naw. Dat Lite nay ohn mal.
Just Kidding Par.
I like your "gahtar" very much.